Mudara raTinashe Muchuri: July 2012
Ndakatora nguva yangu kuterera kuCD neDVD reDevine Touch apo vakomana ava vakaita basa guru rokuimba. Basa iri rakabva randiitazve kuti ndisangane nechirongwa chirikuitwa neZimbabwe Prisons, icho chiri kubuda pachivhitivhiti cheZTV. Mushure mokuona chirongwa ichi ndakabva ndafunga zviitiko zvakaitika muupenyu hwangu mugore ra2008 nera2010.
Musi wa28 Chikumi 2008, ndakarohwa navarume vatatu vandisingazivi. Vakanditorera mari yekusiyabasa kwandainge ndaita apo kambani yedu yainge yaparara. Vakatorazve nhare yangu, bhutsu pamwe nembatya dzangu. Vakandirova chose ndokundisiya ndakarara pasi asi havana kundikuvadza zvokubuda ropa. Havana kubatwa varume ava. hwaiva husiku ini handina kuvaona kuti ndivanaani.
Musi wa25 Chivabvu 2010, kumba kwangu kwakabiwa navamwe vanhu vandisingazivi kuti vaiva vanaani zvakare. Vakaba kusiya mumba musisina zvandainge ndashandira kwemakore anosvika makumi maviri. Vakandisiya ndaiita kunge mukomana arikubva kumusha achienda kudhorobha kundotsvaka basa. Vanhu ava havana kubatwa kusvika nanhasi uno. Handivazivi, pamwe ivo havo ndivo vanondiziva vanototi vakandiona voti ndiye uya murume watakakosvora pfuma yake.
Muna Chikunguru wegore ra2010 ndipowo pandakasvika kujeri reCetnral Prison neChikurubi Farm Prison nomukuru wandaishanda naye mushakabvu Walter Muparutsa tine donzvo rokuda kusimbaradza mabasa avasungwa mune zvehudavadi munzvimbo dzakaita samajeri. Taiti kana vapari vemhosva ava vakabuda kubva munzvimbo idzi vasina zvavanoita zvinogona kuzovapa kudzokera kumabasa avo ekupara mhosva. Zimbabwe Prisons yakatitambira zvakanaka ikaita kuti tione zvavaiita zvehudavadi navasungwa. Takafara chose izvo zvakaita kuti tionewo vasungwa vachiita basa roudavadi sereudavadi.
Zvino pakazouya chirongwa che'Another Chance', ndakati izvi zvakanaka. Daiwo ivo vanoita chirongwa ichi vachitipawo mukana wekuona avo vakabuda mumatirongo ndokudzokera mumusha kunogara navamwe. Pamusoro pekugara navamwe mumusha tinodawo kuona vaya vakasiyana nemabasa ekupara mhosva ayo vaiita vasati vapinda mujeri. Mumapepanhau munongobuda nyaya zhinji dzeavo vanodzoka kundoparamura zvakare. Zvakanakisisa kuti tionewo avo vakaita kunyange zvidzidzo zvemabasa amaoko nezvimwewo kuti vari kuitei neruzivo urwu. Zvakanaka chose kuti tibvume kupa vanhu vanotikosvora pfuma yedu kana tavaona vachiti vakadzoka mumusha vanova vanhu kwavo. Zvino chirongwa cheumwe mukana ichi chikatibatirawo vamwe vakapiwa mukana vakava vanhu pavanhu zvinoita nyore kuti vanhu vazive nokutambira vaimbove sasunga ava. Ivowo vadavadi vaya kana vabuda mumajeri ngatizovaonazve vachienderera mberi nokuimba uko vakawana vari mujeri. Izvi zvakare zvinoita kuti vatambirwe zvakanaka mumusha.
ini pandakainda kujeri ndikaona vakomana navasikana vachidavadika, ndakati izvi zvakanaka. Shungu dziya dzandaimbova nadzo dzokuti ndikaona panorohwa mbavha ndinoitema nebwe dzakabva dzangopera. Ndakatanga kuregerera kunyange avo vakandibira vandisingazivi. Ndakanga ndatorwa mwoyo nehudavadi hwavadavadi vemujeri ava. Zvino kana vakazozviita vabuda mujeri zvinovapa hupenyu hunoita kuti vasadzoka kwavakabva, vagopedzesera voti, 'Handidzokeri Shure.'
Musi weChishanu chikoro chePrimary chekuHopley chaicheredza zuva rokuverengwa kwamabhuku. Mukuru wechikoro cheHopley Primary vaEdwin Msipa vanoti,' Zuva iri nderekupa yeuchidzo izere zvikuru kuvadiki navakuru kuti bhuku ndiro musimboti wezivo yeranhasi namangwana.Donzo:Kusimudzira nokusimbaradza tsika yokurava zvinyorwa zvevamwe nezvavowo,kunyora ngano-nyaya nokudzirava pamwe nokunyora nhetembo,kudzirava nokutaiwo dzakanyorwa nevamwe.'
Vakaenderera mberi vachiti, 'chirongwa ichi chichange chichiitwa kotoro yoga yoga pane shuviro yokusimbaradza ukama hwebhuku nemhuri sezvo chirongwa icchi chichikurudzira kuti mhuri dziite izvi kumba zuva roga roga.Vabereki vanokurudzirwa kuravira vana vavo mabhuku nekuvataurira ngano kwete kuti ndezvambuya, ticha kana kuti zvakapera nechinyakare.'
Pavanhu vainge vakakokwa musi uyu paiva neniwo Mutumwapavi ndakamirira sagano reGlobal Arts Trust. Mushure mokunge vana varatidza hunyanzvi hwavo pakudzana kwechinyakare uyewo kutamba mitambo yekuedzesera ndakazopiwa vana navanhu vakuru avo vaiva nechidokwadokwa chekuziva chinonzi kunyora nyaya.
Vandakapiwa ava vaisanganisira vana, vadzidzisi, vabereki, pamwe navafundisi vedzisvondo . Ndakaita awa imwe chete navo tichikurukura nenyaya yekuti chii chinoita kuti munhu agonzi munyori. Yaiva nguva inofadza zvikuru apo takaona kuti nyaya runenge rwendo runofambwa nemuchovha weruzhinji. Muchovha unobva panzvimbo yekutanga wakananga kwaunoperera. Munzira pane vanhu vanosara vamwe vachikwira. Mukufamba rwendo imomu mune zvinoonekwa nevanhu vanenge vachifamba rwendo urwu. Pavanhu vose ava kunosara muchairi, mukokeri pamwe naiwo muchovha wacho. Zvino ndivoka vachovhi venyaya ava. Motokari ndiye mutauri wenyaya, muchairi ndiye mutambi mukuru munyaya uye mukokeri ndiye mubatsiri wemutambi mukuru munyaya. Vamwe vanhu vese vanokwira nokuburuka ndivowo vamwe vanhu vanosanganikwa navo munyaya painotanga kana painoperera asi vasina kubvira vamboenekwa pane dzimwe nzvimbo.
Chakandifadza musi uyu ndechekuti ndakasangana navakuru vairatidza kuti vainge vatozvinetera zvokunyora izvi asi mushure mekukurukura tose vakazoona kuti vane basa rekutaura runyaya rwavo. Mumwe wevafundisi ndiye akazonditi, ‘nyaya yamataura yakanaka asi munofanirawo kuenda kunze kunze kwemadhorobha uko mundotora nyaya dziri ikoko dzakakosha dzinotaura zveumunhu hwedu savanhu vemuZimbabwe.’
Mukutaura kwaVaEdwin Msipa, vanoti mukotoro inotevera chirongwa chekukurudzira kuvenga ichi chichaitwa musi wa10Mbudzi paHopley Primary. Vane tarisiro yokuti kuuyewewo vanyori vane mukurumbira kuzoverengera nyaya kuvana vepachikoro apa pamwe navabereki vavo.
Find the voice of my pen in the following anthologies. it is here I exercised the freedom of my voice. My voice was free to talk about love. Love for my people, love for all the things that surrounds me. Find these books and free your voice.
The War Against War: Poetry about stark realities of war by Mensa Press USA (2010)
Defiled Sacredness: A Collection of Poems About the Effects of Rape and Sexual Abuse on the
Individual and Society by Mensa Press USA (2010)
Visions of The Motherland: A Poetic Celebration of The Cultures, Tribes and People of Africa by Mensa Press USA (2010)
Daybreak: There is poetry on love, life in general, and the occasional politics… By Poetry Bulawayo Zimbabwe (2010)
State of the Nation: Contemporary Zimbabwean Poetry Conversation International Poetry Project (2011)
- July 18, 2012 4 comments: Links to this post
Vanasikana vanoita zveudavadi muZimbabwe vosumudzira mureza wenyika.
Cynthia Marangwanda aka Flochyld at work
Muzvare Batsirai Chigama uyo anozivikanwa nokuita nduri dzinotekenyedza pfungwa dzavanhu ahange achisumuka muHarare akananga kuMozambique nomusi weMugovera 14 Chikunguru, 2012 kundovapo pachiitiko chemutambo wezvavadavadi unodaidzwa kuti Tambo Tambulani Tambo Art Camp and Festival unoitikira mumumhenderekedzo dzegungwa kuPemba dzinova idzo pachinzvimbo chetatu pakukura kwadzo muzendereka rose, nzvimbo inonzi iyo yakagona kukwezva vanhu vendudzi netsika dzakasiyanasiyana kubva mupasi rose kuzogara nokuumba tsika nokutambira kusiyana kwetsika namagariro avo. Muzvare Batsie sekuzivikanwa kwaanoitwa navatsigiri vake ainge ariko muchiitiko chemutambo uyu zvakare mugore radarika. Adzoka kubva kumutambo uyu veko vakaona zvakakodzera kuti iye adzokezve kundobatsirana navo kufambisa mutambo uyu zvakanaka zvinoita kuti vadavadi vose vachange vachizova nemukana wekuratidza hunyanzvi hwavo uku vabve vachifara. Mushure mekunge avapa mazano ekufambiswa kwemadopiro ehudavadi akaita sewawa, Batsie akanzi adzokezve azobatsira mutambo uyu nenyaya yekufambiswa kwamashoko uyewo kuti azoturikira nechirumbi kuvaadavadi vachange vachibva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia neZimbabwe avo vasingagoni kutaura Portuguese vachange varipowo pachiitiko ichi musvondo rinotevera.
Mukukurukura naBatsie, anoti iye anofara kudzokera kuMozambique kundobatidza muchiitiko chakanaka kudai. Akati iye Tambo Tambolani mutambo unoitirwa matinogona kutaura sekuti muruwa. Zuva nezuva vadavadi vanenge vachidavadika pamberi pavanhu vazhinji chinova chinhu chinofadza chose. Hapana mudavadi anoda kudavadika pasina vanhu. Zvakare chinoita kuti mutambo uyu ufadze ndechekuti vadavadi vanenge vachidavadikira pamberi pavanhu vasingagari vachiona kudavadika kwemhando yapamusoro yakadaro. Nokudaro unenge uri mukana wavo wekuona vadavadi vekune dzimwe nyika kusanganisira vemuMozambique mekare avo vavasingagari vachiona.
Kuenda kwamuzvare Batsie kwauya mushure mekunge vamwe vadavadi vevanasikana vaonekwa vachiinda kunyika dzekunze kundodavadika pamitambo yezvekutandadza nokuvaraidza vanhu. Mumwedzi wadarika muzvare Cynthia Marangwanda aka Flowchyld akainda kundovapo pamutamba wananyanduri pasi rose unodaidzwa kuti Poetry International Festival Rotterdam kuNetherlands uko anonzi akasiya akanga vanhu vaivepo mate mukanwa nezvidavado zvake zvekunyandura pfungwa nemhando yeHip Hop. Achibva ikoko akadarikira kuenda kuSouth Africa kuGrahamstown Arts Festival uko akaenderera mberi nehunyanzvi hwake hwekufadza vateveri venduri kunyika iyi.
Muvhiki yadarika iyi muzvare Rutendo Machiridza akaonekwa achisumuka kubva muHarare chiinda kunyika yeSweden ari parizvino. Ikoko Rutendo achange achivaraidza nokutandadza vanhu veko nemisambo wembira yeNyunganyunga. Zvinofadza zvakadii kuona kuti vanasikana venyika ino varikusumudzira musambo wechiridzwa chembira pasi rose kubudikidza nekuinda kunyika dzekunze idzi vachindoratidzira hunyanzvi hwavo pamwe nezvidavado zvavo pakushandiswa kwechiridzwa ichi mukuvaraidza nekutandadza vanhu?
Uyuwo muzvare Elizabeth Muchemwa anozivikanwa nezita rekuti Zaza akaendawo kuSpain uko achange ari pazvidzvo zvekuvandudza matambiro emitambo yekuedzesera (theatre) ayo anonzi neumo kinesia , kunova kudzidzaswa kwevatambi vemitambo yekuedzesera, vadzani, pamwe nevaimbi kuti vagone kushandisa dariro ravo zvine unyanzvi hwapamusoro. Zviya zvekuti kana mudavadi apinda mudariro tinobva tashaya kuti ndiye uya watambenge tichitaura naye here apfeka basa rake.
Kubuda kuri kuita vanasikana veZimbabwe vadomwa munyaya ino kusanganisira Dudu Manhenga uyo akaenda kundodavadika kuItaly uko akasiya zita nembiri uyewo Hope Masike uyo akapedza gore rapera achiitisa zvidzidzo zvembira kuEurope uko anova adzokera kundofadza avo vakaona zvakanaka kuti ange achidzokera kuEurope kuti avavaraidze nemisambo wembira yerudzi rweNyunga Nyunga. Zvakadai izvi zvinoratidza kuti kubata kwevadavadi vechisikana kuri kusumukira zvikuru munyika yeZimbabwe. Mumashure umo maingozivikanwa vadavadi vechisikana vashoma zvikuru kunze uko, mazita akaita sanaBeula Dyoko, Mbuya Rambisai Stella Chiweshe, Benita Tarupiwa, Chioniso Maraire, Dorothy Masuku nevamwewo. Asi iyezvino mazita awanda uye misambo irikuenderera mberi ichiwanda.
uku izvo zvakaita kuti nzvimbo iyi ive netsika davanhu vakasiyanasiyana.
Elizabeth Muchemwa uyo anozivikanwa nezita rekuti Zaza anoenda kuSpain
Zaza uyo achangobva kubagtidza mukufambiswa kwemitambo miviri yaAugust Strindberg inoti The Father/Baba naMiss Julie/Muzvare Julie iyo yakaitirwa kuReps Theatre kubva musi wa18 kusvika musi wa 23 Chikunguru 2012 pasi pamushandirapamwe weGlobal Arts Trust neComplete Arts Project, akasumuka kubva muHarare kuenda kuSpain musi weSvondo 8 Chikunguru kundova muzvidzidzo zvemitambo yekuedzesera zvinodaidzwa kuti Neumo Kinesia izvo zvichange zvichiitirwa muguta reVictoria kuSpain kubva musi wa9 kusvika musi wa18 Chikunguru 2012. Zvidzidzo zveneumo kminesia zvichange zvichipiwa kuvadavadi vanoita zvekuimba, kudzana pamwe nokuedzesera.
Zaza anoti iye anofara zvikuru kuwana mukana wekundobatana navamwe vatambi vemitambo yekuyedzesera iyi kubva kunyika dzapasiyana muzendereka rose. 'Ndinovimba kuti ndichanosangana navamwe vadavadi kubva kune dzimwe nyika pasi rose, avo vachange vachibva kutsika namagariro akasiyana neangu. ndinovimba kuti kuchange kuchinakidza kwazvo pamwe nokudzidzisa uyewo uyu uchava mukana angu wekuziva zvitsva,' akadaro Zaza.
Akaenderera mberi achiti iye chakaita kuti anyorere kupinda muzvidzidzo izvi kwaiva kusati iye haazivi zvemitambo yekuedzesera iyi kana kuti iye ane ruzivo rwakawandisa nazvo asi kuti zvakakosha kudzidza zvitsva sekuti kudzidza hakuperi. Iyo nzira yekuita mitambo yekuedzesera iyi yeNeumo kinesia itsva yakatangwa nemumwe nemumwe mubatadzi wezvemitambo yekuedzesera iyi wekuSpain. 'Nokudaro zvakanaka kuti ndiende ndindoona kuti vamwe vanozvifambisa sei mukuita mitambo munyika dzekwavo izvo zvandinogona kuzoshandisawo pamwe nekugoverana apo navamwe muno muZimbabwe apo ndichinge ndadzoka.'
Zaza anozivikanzwa nekuridza mbira iya yerudzi rweNyunga Nyunga apo anenge achiita madetembedzo ake anoti iye anofarira kudzidza zvitsva uye akasununguka kugashira mamwe maitirwo ezvinhu kutsva kunoita kuti avandudze maitire ake basa rake rehudavadi. Ichi chimwe chesakiso yekuenda kwake kuniyka yeSpain. Zaza uyo akawana mari yekufambisa nekubhadharira apo anozenge achigara kubva kuhomwe yeCulture Fund of Zimbabwe anoti iye, 'Ndinotenda Culture Fund of Zimbabwe nekundibatsira kuti rwendo urwu rubudirire nokuti kudai isiri iyo zvaizondiomera kutsvaka mari yekufambisa. Handizivi kuti ndaizoita mupemherei wemari yekufambisa iyi.'
Apo akabvunzwa kuti aizondosiyei kuSpain, Zaza anoti iye aizondosiya mweya wekutsungirira weZimbabwe pazvinhu zvose zvinoitwa navanhu pamwe nehuchenjeri hwevanhu vemunyika ino. Anopamhidzirazve achiti, 'Ndine kariro yekundoumba ukama navanhu vandichanosangana navo kuSpain avo vanobva kunyika dzakasiyanasiyana, uyewo ndine kariro yekuti vamwe vevadavadi ava vangaozokwanisawo kuuya kuZimbabwe kuenderera mberi nokugoverana zvidobi zvekuvandudza maitiro emitambo yekuedzesera iyi. Ndichataura pamusoro penyika yangu. Ndichaita kuti vose vandinosangana navo vazive nezveZimbabwe, zvose hazvo zvandichagona kutaura panguva diki yandichange ndiri kuSpain.
Zaza anopedzesera nekutenda chikwata chaanoshanda nacho paGlobal Arts Trust icho anoti chaimutsigira zvikuru pakuronga rwendo rwake rwekuSpain urwu.